Koobka 2015 TC200 Winter: $ 350 OFF + Bixin Doono! Ku habboon tahay 12 / 22 / 15
Home » Bowflex » Koobka 2015 TC200 Winter: Ka hesho $ 350 OFF Plus Shipping Free! Ku habboon tahay 12 / 22 / 15
Winter 2015 Treadclimber Kuuboon TC200
Hel $ 350 OFF Plus BILAASH bilaash ah wakhti xaddidan oo keliya
Ku badbaadi $ 350 ee Brand New Treadclimber TC200 laga bilaabo Bowflex! Isticmaal Xeerka Xadhiga HOLIDAYFIT at Checkout
Ballanka Bowflex waa Valid til 12 / 22 / 15 - Riix halkan hoose si aad u heshid faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan Saleeblock Holiday Bowping
$ 350 OFF + BIXIN KA BIXIYO TC200 - AMA - $ 275 OFF & BIXIN KA BEDDELISTA on TC100 at Bowflex.com! Code: HOLIDAYFIT (dhamaato 12 / 22)
Ku saabsan Treadclimber TC200:
Tijaabada cusub ee Treadclimber TC200 ee Bowflex wuxuu bixiyaa tabaruc kuleyl ah oo kuleyl ah oo saameyn hoose ku leh xubnahaaga. Waxay leedahay naqshad 3-in-1 u gaar ah oo u shaqeeya sida treadmill, qalab jaranjaro ah iyo halbeegba hal mid. Waxay leedahay 2 gaar ah tufaax gaar ah oo leh suunka dhaqaaqa kuwaas oo u dhaqaaqa dhaqdhaqaaqa kor iyo hoos. Khibradahan tababarka gaarka ah ayaa kaa caawin kara inaad ku gubto 2 iyo kalabar badh kaloori ka badan kooraska dhaqanka ee treadmill. TC200 wuxuu leeyahay mishiinka mashiinka dambe ee mashiinka dambe ee ammaanka, iyo miisaanka miisaanka waa xaddiga 300. Waxaa jira noocyo 4 ah oo la heli karo si loogu isticmaalo TC200 taas oo ah mid weyn haddii dad badan oo reerkaaga ah ay isticmaalaan mashiinka. Bowflex waxay bixisaa damaanad soo saaraha sannadka 3 mashiinka oo dhan. TC200 waxay caadi ahaan iibsataa $ 3,299, laakiin waxaad ku kaydin kartaa lacag wakhti xaddidan oo kaliya tan bishan December 2015 Bowflex Treadclimber TC200 coupon
Lamaanahan 2015 ee Tartarsada TC200 waa mid ka yimid 11 / 24 / 15-12 / 22 / 15